तपाईलाई थाहा छ यी सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी अनौठा कानुन ? | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ यी सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी अनौठा कानुन ?
पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स आफैमा अप्रिय घटना हो । डिभोर्सको विषयमा दुनियाँका विभिन्न देशमा विभिन्न खाले चलन तथा नियम कानुन छन् । कतिपय देशहरु डिभोर्सका मामिलामा बढि महिलामैत्री छन् भने कतिपय देशहरुले पुरुषलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छन् । बेलायती अनलाइन मेट्रो डट को डट युकेका अनुसार डिभोर्स सम्बन्धी विश्वका केही अनौठा नियम कानुन यस्ता छन् :
– साउदी अरबमा यदि कुनै महिलाले आफ्नो श्रीमान्लाई हरेक बिहान मिठो कफी बनाएर खुवाइनन् भने श्रीमानले उनलाई तलाक दिन पाउँछ ।
– चीनको एक पुरानो कानुन अनुसार कुनै पनि महिलालाई आफ्नो श्रीमानले धोका दिइरहेको लागेमा डिभोर्स गर्ने हक छ । यतिमात्र होइन धोका दिएको वा परस्त्रीसँग लागेको देखेमा हत्यासम्म गर्ने छटु परुानो काननुले दिएको थियो । नियम यस्तो थियो कि धोकेबाज श्रीमानको हत्यामा कुनै हतियारको प्रयोग गर्न पाइन्नथ्यो ।
– समोआमा यदि पतिले आफ्नी पत्नीको जन्मदिनको शुभकामना दिन भुल्यो भने सकसर्थ्यो । आफूलाई बर्थडे विस नगर्ने लोग्नेलाई डिभोर्स दिने हक समोआका महिलामा सुरक्षित छ ।
– अमेरिकाको कन्सासका कतिपय क्षेत्रमा पुरुषलाई आफ्नी श्रीमतीकी आमासँग पनि शारीरिक सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ । यसो नगर्ने पतिलाई उसकी श्रीमतीले डिभोर्स दिन पाउँछे ।
-कुवेतमा यदि कोही पुरुषले महिलालाई घुरेर हे¥ये भने कारागारको हावा खानुपर्छ ।
– अस्ट्रेलियामा यदि कोही आदिवासी महिला आफ्नो पतिसँग अलग हुन चाहेमा पतिलाई मनाउने कोसिस गर्न सक्छन् वा तुरुन्तै कुनै दोस्रो पुरुषसँग बिहे गरेर आफ्ना पहिलो दाम्पत्य सम्बन्धलाई टुंगाउन सक्दछन् ।
-अमेरिकाको कोलोराडोमा पहिले यस्तो कानुन थियो कि आइतबार आफ्नो इच्छा विपरित सेक्स गर्न चाहने पतिलाई पत्नीले कारागार हाल्न सक्थिन् र डिभोर्स दिन सक्थिन् । आइतबार विदाको दिन आराम गर्ने दिन भएकाले सम्भोगका लागि कर गर्नु हुँदैन
Previous post: तपाई वियर पिउनु हुन्छ ? हेर्नुहोस फाईदा, बियर नराम्रो की तपाईंको सोच
Next post: संसारमा निर्दयीहरु कति प्रकारका हुन्छन् ? सफलताका लागि निर्दयी बन्नैपर्छ ?